Silica Fused, Quartz Fused, Quartz Powder - Dinglong
Silica la isku daray
Silica Fused for Refractory Codsiga
Silica Fused ah oo loo shubay Maalgashiga
Silica Fused for Warshadaha elektaroniga
Buro Silica ah
Budada silica la isku daray
Bur Silica Fused
Budada silica budada ah
Qalabka Fused Silica Fused
Badarka silica ee la shiilay
Firidh Silica Fused
Sand Silica la isku shiiday
Waxyaabaha Sifeynta Silicada Fused
Dinglong Quartz Limited waa shirkad soo saarta quartz wax soo saar oo xarunteedu tahay Jiangsu China. Dinglong wuxuu ku howlanaa baaritaanka iyo soosaarida alaabada quartz-ka wanaagsan tan iyo 1987. Badeecada kaladuwan waxaa ka mid ah silica fused, quartz fused, quartz powder, quartz tube iyo quartz crucible. Qalabka quartz ee 'Dinglong' iyo alaabooyinka ayaa maalmahan si ballaaran loogu isticmaalaa qalabka wax lagu diido, korantada, qorraxda, macdanaha iyo codsiyada kale ee gaarka ah waxaana lagu qaybiyaa suuqyada gudaha iyo suuqyada dibedda.
Nadiif sare oo silica ah (99.98% amorphous) Waxaa laga heli karaa labadaba bur iyo noocyo hadhuudh ah Gogol isku dhafan ...
Nadiif sare oo silica ah (99.98% amorphous) Qalabka balaadhinta kuleylka ayaa siiya sh kuleyl badan ...
Nadiif sare ayaa iskudarsaday silica (99.98% amorphous) Isuduwaha balaarinta kuleylka oo hooseeya, farmashiye joogto ah ...
Alaabada lagu kalsoon yahay ee Quartz waa sheyga lagama maarmaanka u ah soo saarista monocrys ...
Iftiiminta Waxaan haynaa wax soo saar balaaran oo tuubbooyin quartz ah oo loogu talagalay codsiyada nalalka oo si buuxda ayaan u awoodaa ...
Budada quartz nadiif ah oo sareeya (99.3% crystalline) adkaanta sare ee 7 (Mohs) iska caabinta kiimikada sare L ...
Silica Fused waa shey aad u dahaadha insulinta oo aad u hooseeya kuleylka kuleylka. Iyada oo leh iska caabbinta kuleylka kuleylka sare, waxaa badanaa loo isticmaalaa codsiyada diidmada, sida aluminium dhaqeyaasha ama codsiyada aadka u sarreeya.
Maalgashiga maalgashiga, silica la isku daray ayaa loo isticmaalaa xasiloonida muggeeda. Silica Fused wuxuu leeyahay isku dheelitirnaan balaarin heer kul aad u hooseeya isla markaana si dulqaad leh oo aad u adag ayaa loo soo saari karaa iyadoo laga soo saaro qolof fudud.
Silligeena isku dhafan ayaa leh adkeysi koronto oo aad u sareeya iyo kuleylka kuleylka oo hooseeya, sidaa darteed waxaa badanaa loo isticmaalaa warshadaha elektarooniga sida buuxinta walxaha isku xira epoxy-ga ee semi-conductors.
Awood wax soo saar xoog leh
Muddo 30 sano ah oo la aasaasayey, Dinglong wuxuu kasbaday taageero farsamo iyo farsamo oo xoog leh iyo khibrado aad u tiro badan oo lagu soo ururiyey soosaarida agab quartz ah
Tayada Wax Soo Saarka Sare
Si aan u siino alaab quartz tayo sare leh oo qiimo leh waa himiladeenna. Waxaan aaminsanahay in alaabooyinka la isku halleyn karo ay naga caawin karaan helitaanka iibinta hoggaaminta iyo dhisidda kalsoonida iyo saaxiibtinimada macaamiisheenna.
Hal-abuurnimo joogto ah
Dinglong wuxuu rumeysan yahay hal-abuurnimo isdaba-joog ah inay tahay waxa markasta gadaal u sii riixa urur. Ku noolaanshaha adduunyo xawaare sare leh, waxaan aaminsanahay la qabsiga hal-abuurnimada inay horseedi doonto fursado badan oo looga guuleysan karo tartamada oo ay macaamiisha ula xiriiraan
Si loo helo qalab quartz ah oo tayo sare leh iyo qiimo leh.
Degmada warshadaha Fangshan, Lianyungang, JiangSu, Shiinaha